Iingcebiso ezi-7 zokunyamezela ngeFibromyalgia | Unokubuyisela njani kwi-Fibromyalgia?
Iingcebiso ezi-7 zokunyamezela kunye noFibromyalgia
13 / 06 / 2017 /1 Comment/i udinwe, Intlungu engapheliyo/av ubuhlungu
Iingcebiso ezi-7 zokunyamezela ngeFibromyalgia
Cima kude udinwe Ngaba uza kuhamba eludongeni? Masikuncede.
I-Fibromyalgia inokubangela umngeni omkhulu kubomi bemihla ngemihla. Kunokuba nzima ngokwenene ukuba nesifo esingapheliyo sentlungu. Nazi iingcebiso ezi-7 kunye nemilinganiselo enokukunceda ukukhulula iimpawu eziqhelekileyo ze-fibromyalgia kwaye wenze usuku lwakho lube lula.
- Sisonke ukuQonda ukuQondwa kwee-Chronic Pain Syndromes
Uninzi lwabo baneentlungu ezingapheliyo bavakalelwa kukuba abaviwa okanye bathatyathwa nzulu. Loo nto ayinakuvunyelwa ukuba ibe njalo. Sima kunye nabo bachatshazelwa ziintlungu ezingapheliyo kwaye sicela ngobubele ukuba wabelane ngeli nqaku kumajelo eendaba ezentlalo ukwandisa ukuqonda malunga nesi sifo. Ndiyakubulela kwangaphambili. Zive ukhululekile ukuba usilandele nge Facebook og YouTube.
Kumasebe ethu ahlukeneyo eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kunye noViken (Eidsvoll Isandi og Råholt) oogqirha bethu banobuchule obukhethekileyo obuphezulu kuvavanyo, unyango kunye noqeqesho lokubuyisela kwintlungu engapheliyo. Ngathi, uya kuhlala uthathwa ngokungathí sina. Cofa kwiikhonkco okanye apha ukufunda ngakumbi malunga namasebe ethu.
Skrolela ezantsi ukuze ubone iividiyo ezimbini ezintle zokuzilolonga ezinemithambo kunye neendlela zokuphumla ezinokuba luncedo kuwe nge-fibromyalgia.
Abachaphazelekayo? Joyina iqela le-Facebook «Rheumatism -Norway: Uphando kunye neendaba»Uhlaziyo lwamva nje olwenziwe kuphando kunye nokubhala kwimithombo yeendaba malunga noku kunye nokunye ukuphazamiseka rheumatic. Apha, amalungu anokufumana uncedo kunye nenkxaso-ngalo lonke ixesha lemini- ngokutshintshana ngamava abo neengcebiso.
1. Uxinzelelo phantsi
Uxinzelelo lunokubangela kwaye lubangele "i-flare ups" kwi-fibromyalgia.
Ukunciphisa uxinzelelo kwimpilo yemihla ngemihla kunokukhokelela ekuphuculeni umgangatho wobomi kunye neempawu ezincinci. Ezinye iindlela ezicetyiswayo zokujongana noxinzelelo yiyoga, ingqondo, i-acupressure, umthambo kunye nokucamngca. Iindlela zokuphefumla kunye nokufumana ubuchwephesha kwezo ndlela zinganceda.
- Thatha ixesha lokuphumla
Funda ukukhululeka kwimihla yanamhlanje ebeka imigangatho ephezulu. Sincoma kakhulu iseshoni yokuphumla imihla ngemihla mat acupressure (cofa apha ukufunda ngakumbi - ikhonkco livula kwifestile entsha). Olu lwahluko lukwanawo nomqamelo wentamo obandakanyayo okwenza kube lula ukusebenza kwizihlunu ezixineneyo kumqolo ongaphezulu kunye nentamo.
Funda: Iimpawu ezi-7 ezaziwa ngokuba ziAggravate Fibromyalgia
Cofa kwikhonkco elingaphezulu ukuze ufunde inqaku.
2. UQeqesho oluQhelekileyo
Ukuzivocavoca nge-fibromyalgia kunokuba nzima kakhulu.
Nangona kunjalo, ezinye iindlela zokuzilolonga zinokusebenza kakuhle-njengomthambo oqhelekileyo, ophantsi, njengokuhamba okanye umthambo echibini lamanzi ashushu phakathi konyango olungcono lwe-fibromyalgia.
Ingakunceda ukunciphisa iintlungu kunye nokuqina, kunye nokukunika amandla okunyuka kolawulo lokuqaqanjelwa yintlungu engapheliyo. Thetha nogqirha wakho, i-physiotherapist yakho, i-chiropractor yakho okanye ugqirha ukufumanisa ukuba loluphi uhlobo lwenkqubo yokuzivocavoca enokuthi ilunge kuwe - siyavuya ukukunceda ngetshaneli yethu ye-Youtube okanye enye yeeklinikhi zethu ezidibeneyo ukuba uyafuna.
IVIDIYO: Imithambo emi-5 yokuHamba kwabo baneFibromyalgia
I-Fibromyalgia ibangela iintlungu ezingapheliyo kunye nokuqina kwezihlunu zomzimba kunye nokudibana. Nantsi inkqubo yokuzivocavoca eyintlanu enokukunceda ugcine umva wakho, okhalweni kunye ne-pelvis ihamba. Cofa apha ngezantsi ukuze ubone imithambo.
Joyina usapho lwethu kwaye ubhalise kwisiteshi sethu seYouTube Iingcebiso zokuzikhulula simahla, iinkqubo zokuzivocavoca kunye nolwazi lwezempilo. Wamkelekile!
IVIDIYO - Uqheliso lwe-7 lweeRheumatists:
Aqali ividiyo xa uyicofa? Zama ukuhlaziya ibrawuza yakho okanye yibukele ngokuthe ngqo kwisitishi sethu seYouTube. Kwakhona khumbula ukubhalisa-simahla-kwisiteshi ukuba ufuna iinkqubo zoqeqesho ezifanelekileyo kunye nokuzilolonga.
3. Ibhafu eshushu
Ngaba uyonwabile xa uphumla kwindawo yokuhlambela eshushu? Inokukunceda.
Ukulala kwindawo yokuhlambela efudumeleyo kunokubangela ukuba izihlunu zikhululeke kunye nentlungu yokuphumla uphahla kancinci. Olu hlobo lobushushu lunokunyusa izinga le-endorphin emzimbeni - elithintela iimpawu zentlungu kwaye kunokukhokelela ekuphuculweni komgangatho wokulala. Sincoma ngenye indlela ukusetyenziswa kwe ipakethi yobushushu enokusetyenziswa kwakhona (jonga umzekelo apha - ikhonkco livula kwifestile entsha). Ipakethi isebenza ngokuyifudumeza kwaye emva koko ibeke kwindawo eqinile kunye nezihlunu ezibuhlungu.
4. Nciphisa iCaffeine
Uyayithanda ikomityi yekofu eyomeleleyo? Inokuba ngumkhwa ombi kuthi ngefibro, ngelishwa.
I-Caffeine sisikhuthazo esiphakathi-Oko kuthetha ukuba ivuselela intliziyo kunye nenkqubo ye-nervous system ukuba ibe 'kwisilumkiso esiphezulu'. Xa uphando lubonise ukuba nge-fibromyalgia sinemicu ye-nerve esebenzayo, siyaqonda ukuba oku ayisiyonto ifanelekileyo. Kodwa asizukuyisusa ikofu yakho ngokupheleleyo-ibiza kwenziwa kakubi ngendlela emangalisayo. Kungcono uzame ukuhla kancinci.
Oku kunokukhokelela kumgangatho wokuhlwempuzeka wokulala kunye noxinzelelo. Ke zama ukunciphisa umda we-caffeine, njengoko abo bane-fibromyalgia sele benayo inkqubo ye-neva esebenzayo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba uphephe ikofu kunye neziselo ezinamandla ukusuka emva kwemini ukuya phambili. Mhlawumbi ungazama ukutshintshela kukhetho olufumanisayo?
Funda: Ezi ziindidi ezi-7 ezahlukeneyo zeFibromyalgia Pain
Bekela bucala ixesha lakho ngokwakho-yonke imihla
Ixesha lokwenyani linokubaluleka ngakumbi kuthi nge-fibromyalgia.
I-Fibromyalgia inokubenza nzima ubomi ngayo yonke imiceli mngeni ikuphosela yona.Ke qiniseka ukuba ubekela bucala ixesha lakho yonke imihla njengenxalenye yonyango lwakho. Yonwabela into oyithandayo, mamela umculo, phumla- yenza into ekwenza uzive ungcono.
Ixesha lokuzonwabisa elinjalo linokwenza ukuba ubomi bube nokulingana ngakumbi, kunciphise amanqanaba oxinzelelo emzimbeni wakho kwaye kukunike amandla ngakumbi kubomi bakho bemihla ngemihla. Mhlawumbi iyure yenyanga yonyango lomzimba (umzekelo, unyango lomzimba, chiropractic yanamhlanje okanye acupuncture?) nayo ingangumbono olungileyo?
6. Thetha ngentlungu
Musa ukubamba iintlungu zakho. Ayilunganga kuwe.
Abantu abaninzi kakhulu abane-fibromyalgia bahamba kwaye bagcine intlungu kubo - ide ingahambi kwaye iimvakalelo zithatha indawo. I-Fibromyalgia ibangela uxinzelelo kuwe zombini, kodwa nakwabo bakungqongileyo-ke unxibelelwano ngoyena ndoqo.
Ukuba awuziva uphilile - ngoko yitsho. Yithi kufuneka ube nexesha lokukhulula, ukuhlamba okushushu okanye okufanayo kuba ngoku kunjalo ukuba i-fibromyalgia iphezulu. Intsapho nabahlobo kufuneka bazi isigulo sakho kwaye yintoni ebangela ukuba ibe mbi. Ngolo lwazi, banokuba yinxalenye yesisombululo xa ufuna uncedo.
7. Funda ukuthi HAYI
I-Fibromyalgia ihlala ibizwa ngokuba 'sisifo esingabonakaliyo'.
Kubizwa ngolo hlobo kuba kusenokuba nzima ukuba abo bakungqongileyo bakubone ukuba usentlungwini okanye ukuba ubandezelekile uthule. Apha kubaluleke kakhulu ukuba ufunde ukumisela imida kunye noko unokunyamezela. Kuya kufuneka ufunde ukuthi HAYI xa abantu befuna indawo enkulu yakho emsebenzini nakubomi bemihla ngemihla-nokuba ichasene nobuntu bakho obuluncedo kunye neenqobo zakho ezisemgangathweni.
Sikhuthaza wonke umntu onale ngxaki ukuba ajoyine iqela le-Facebook «Rheumatism -Norway: Uphando kunye neendaba»- apha ungathetha ngemeko yakho kwaye ufumane iingcebiso ezilungileyo kubantu abathanda izinto ezifanayo.
Zive ukhululekile ukuba nesabelo kwiiNtlalontle zeNtlalo
Kwakhona, ngoko sifuna å buza kakuhle ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho (zive ukhululekile ukunxibelelana ngqo nenqaku). Ukuqonda kunye nokwanda kokugxila linyathelo lokuqala eliya kubomi obungcono bemihla ngemihla kwabo baneentlungu ezingapheliyo.
Iingcebiso zokukunceda ulwe ne-fibromyalgia kunye nonyango olungapheliyo lweentlungu:
Ukhetho A: Yabelana ngokuthe ngqo kwi-FB -Khuphela idilesi yewebhusayithi kwaye uyincamathisele kwiphepha lakho le-facebook okanye kwiqela elifanelekileyo le-facebook olilungu lalo. Okanye ucinezele iqhosha "SHARE" apha ngezantsi ukuze wabelane ngesithuba kwi-facebook yakho.
Chukumisa oku ukuba wabelane ngakumbi. Enkosi enkulu kuye wonke umntu oncedayo ukukhuthaza ukuqonda okwandayo kwezifo ezingapheliyo zentlungu kunye nefibromyalgia!
Sinikezela ngovavanyo lwangoku, unyango kunye noqeqesho lweentlungu ezingapheliyo.
IPHEPHA ELANDELAYO: Ukuziqhelanisa neentshukumo ezi-5 kwabo bane-Fibromyalgia
Cofa kumfanekiso okanye ikhonkco apha ngasentla.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-TIPS-FOR-Å-HOLDE-UT-MED-FIBROMYALGI.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2017-06-13 20:07:332022-03-22 16:15:26Iingcebiso ezi-7 zokunyamezela kunye noFibromyalgia
Enkosi! Oku bekumnandi… ngekhe wakufunda oku kwiminyaka emininzi edlulileyo. Uye wenziwa utyando kube kanye ngenxa ye-carpal tunnel syndrome. Ngoku ingxaki ikwelinye icala. Kufuneka uzame le mithambo. Enkosi! ?
Nguwuphi oyena: Lyrica (Pregabalin) okanye Neurontin (Gabapentin)? Isikhundla se-100% esipapashiweyo kwiziko le-Ottestad Chiropractor: Turnus chiropractor okanye ...